Air Astana dia mandefa ny sidina Frankfurt-Atyrau
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Astana dia mandefa ny sidina Frankfurt-Atyrau
Air Astana dia hanomboka serivisy vonjimaika avy any Frankfurt ka hatrany Atyrau any andrefan'i Kazakhstan amin'ny 3 febroary 2021. Izany dia manaraka ny filàna fampiatoana ny serivisy nomanina avy any Amsterdam ka hatrany Atyrau nanomboka tamin'io daty io noho ny fameperana napetraky ny manampahefana holandey.
ny vaovao Air Astana Ny sidina dia hampiasaina indray mandeha isan-kerinandro amin'ny Alarobia mampiasa Airbus A321, amin'ny fiaingan'ny Frankfurt amin'ny 13.05 ary ny fotoana hahatongavan'ny Atyrau amin'ny 21:50 ora eo an-toerana.
Notoroana hevitra ny mpandeha mba hahafantatra mialoha ny tenany amin'ny fepetra fiarovana sy ny seranam-piaramanidina ary ny fepetra takiana amin'ny quarantine rehefa tonga any Alemana sy Kazakhstan.
Air Astana no mpitatitra saina any Kazakhstan, miorina ao Almaty. Izy io dia miasa serivisy voalamina, anatiny sy iraisam-pirenena amin'ny zotra 64 avy amin'ny ivon-toerany lehibe, Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Almaty, ary avy amin'ny foibeny faharoa, Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Nursultan Nazarbayev.
Ideal Homes Fampandrosoana manokana ao Algarve
Nanokatra fananana marika roa an'ny UK ny Marriott International